नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । कान्तिपुर अर्काइभ
२७ जेष्ठ २०७७ मंगलबार
सधैँ केही न केही बोलेर राजनीतिक माहोललाई आफूतिर खिचिरहने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हिजोआज अर्थपूर्ण किसिमले मौन छन् । यो बीचमा देशमै उथलपुथल ल्याउने ठूल्ठूला घटनाहरू भइसके । तर कुनै बेला भेनेजुयलादेखि उत्तर कोरियासम्मको चिन्ता लिन भ्याउने उनको आवाज यतिबेला कतै शून्यमा विलीन छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गरेपछि १५ जेठ साँझ प्रचण्डले संघीय संसद् परिसरमा ‘जनपक्षीय र निकै सन्तुलित बजेट आएको’ बताएका थिए । भन्दै थिए, ‘जनतालाई राहत दिने किसिमले, सिर्जनात्मक ढंगले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने गरी बजेट आएकामा म खुसी छु ।’ उनले जम्मा बोलेको यत्ति हो । त्यसयता उनी गुमनाम छन् ।
त्यसयता झन्डै दुई साता हुन लाग्यो, प्रचण्ड हराएका छन् । भूमिगत कालमा प्रचण्डले रुकुममा सेल्टर लिएर बहुचर्चित चुनवाङ बैठक गरेका थिए । त्यही रुकुम पश्चिमको सोती गाउँमा सिंगो गाउँले एकजुट भएर दलित भनिएका युवाहरूको लखेटी–लखेटी नृ:शंस हत्या गरेको विषयमा समेत प्रचण्ड गुमनाम भए ।
नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा प्रचण्ड केही न केही बोलेर वा गरेर चर्चामा आइरहने पात्र हुन् ।
१९ जेठ दिउँसो १ बजेयता उनको वेबसाइट तथा ट्वीटर ह्यान्डिलसमेत ‘अपडेट’ छैन । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका– २ मा १८ जेठ राती ठूलो सवारी दुर्घटना भएको थियो । त्यही दुर्घटनामा निधन र घाइते भएकाहरूप्रति समवदेना एवं स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै प्रचण्डले १९ जेठ दिउँसो सादा कागजमा वक्तव्य प्रकाशित गरेका थिए । त्यो उनको वेबसाइट सीएमप्रचण्डडटकममा समेत राखिएको छ । त्यसयता यो साइट अपडेट छैन ।
प्रचण्डको ट्‍वीटर ह्यान्डिल सीएमप्रचण्डमा पनि कुनै गतिविधि समावेश गरिएको छैन । त्यसअघि उनको वेबसाइटबाट होस् वा ट्वीटर ह्यान्डिलबाट दैनिक कार्यक्रम र गतिविधिहरू सार्वजनिक गरिन्थ्यो ।
अध्यक्ष दाहालका प्रेस संयोजक विष्णु सापकोटाका अनुसार प्रचण्ड प्राय: निवासमै बसिरहेका छन् । अति जरुरी पर्‍यो भने मात्र पूर्ण सावधानी अपनाएर एक/दुई भेटघाट गरेका छन् । सामान्य भेटघाट लगभग बन्द गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमणबाहेक उल्लेखनीय घटनाक्रम केही नभएकाले वेबसाइट, ट्‍वीटर अपडेट नगरिएको संयोजक सापकोटा बताउँछन् । “अध्यक्षले यो बीचमा क–कसलाई भेट्नुभयो । के–के गर्नुभयो भनेर विवरणचाहिँ राखिएको छैन । सदन चलेको दिन प्राय: त्यहाँ गइरहनु भएको छ । विभिन्न जिल्ला, प्रदेशका नेताहरूसँग फोन सम्पर्क गरिरहनु भएको छ”, सापकोटा भन्छन्, “कोरोनाका कारण समस्यामा परेका मजदुरहरूलाई आ–आफ्नो स्थानमा पुर्‍याइदिन, मानिसहरूलाई भित्र–भित्र हिँड्न दिन, विदेशबाट उद्धार गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर पहल गरिरहनु भएको छ । खासै मौन बस्नुभएको छैन । सामान्यत: बोलिराख्नु भएको छ ।”
प्रचण्डले यो बीचमा दुई–तीन वटा मिडिया, अनलाइनमा अन्तर्वार्ता पनि दिएको संयोजक सापकोटाको भनाइ छ ।
कतिपय नेताहरू कुन समय बोल्ने, कुन बेला नबोल्ने, कुन बेला बोल्दा बढी प्रचार वा महत्त्व पाइन्छ ? कस्तो बेला राम्रै बोले पनि विवादमा परिन्छ ? लामै सोच–विचार गरेर प्रस्तुत हुन्छन् । यस मामिलामा प्रचण्ड तुलनात्मक रूपमा उदार थिए । आफूलाई लागेका कुरा उनी ओकलिहाल्थे । तर दुई सातायताको मौनताले भने प्रचण्डले पनि अरू शीर्ष नेताहरूकै सिको गर्न थालेका हुन् ? आवश्यकता नपरी विगतमा पनि नबोलेको र अहिले पनि बोल्न आवश्यक नपरेकाले मात्र मौनजस्तो देखिएको सापकोटा बताउँछन् ।
नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २५ जेठ दिउँसो लामै भेटघाट भयो । यही भेटपछि २७ जेठ दिउँसो ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक राख्ने निधो भएको थियो ।
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे छिनोफानो गर्न नेकपा सचिवालय बैठक बस्न लागेको थियो । प्रायश: ओलीसँगको संवादपछि सञ्चारकर्मीलाई केही न केही खुराक दिने अध्यक्ष प्रचण्ड २५ जेठको भेटप्रति मौन बसे । ओलीसँगको छलफल, सचिवालय बैठक डाक्न गरेको पहलप्रति उनले कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेनन् ।
त्यसअघि १७ जेठमा ओली–प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । सरकारले सचिवालय, स्थायी समिति, केन्द्रीय कमिटीमा कुनै छलफल/सल्लाह नै नगरी ०७७/७८ को बजेटमा एमसीसी सहयोगबाट सञ्चालित परियोजना समावेश गरेपछि नेकपाका नेताहरूले सचिवालय बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । १७ जेठको बैठकमा स्थायी समिति सदस्यद्वय भीम रावल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडासमेतलाई आमन्त्रण गरिएको थियो ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार जहाँ रावलले ‘पेन ड्राइभ’ निकालेर ‘प्रोजेक्टर’ मार्फत संसद्‌बाट एमसीसी पारित भए त्यसका बेफाइदामाथि प्रधानमन्त्रीलगायत नेताहरूसमक्ष प्रस्ट्याउन खोजेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले ‘भइगो अहिले’ भन्दै पन्छाएका थिए । त्यसयता ओलीले बैठक डाक्ने रुचि नै देखाएनन् ।
जानकारका भनाइमा यसपछि प्रचण्ड आफ्नै आग्रहमा २५ जेठमा बालुवाटार पुगे । अनि, ओलीसँगको लामो भलाकुसारीपछि २७ जेठ अपराह्न सचिवालय बैठक बोलाउने सहमति भएको थियो ।
२५ जेठमा दुई अध्यक्षले सल्लाह गरेरै २७ जेठ ४ बजेका लागि डाकिएको सचिवालय बैठक प्रचण्डलाई जानकारी नै नदिई एक्कासि स्थगित गरिएको थियो । स्रोतको भनाइमा बैठक स्थगित गरेपछि मात्र ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यव्यस्तताका कारण आज दिउँसो ४ बजेलाई बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको छ’ भनेर प्रचण्डलाई खबर गरिएको थियो । जबकि यसबेला प्रचण्ड भने सचिवालय बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने तयारीमा जुटिरहेका थिए ।
संसद्‌मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुने भएकाले अन्तिम समय बैठक स्थगित गर्नु परेको र त्यही जानकारी प्रचण्डलाई दिइएको बालुवाटार गतिविधिबारे जानकार नेकपाका एक नेता बताउँछन् ।
प्रचण्डको दैनिकीबारे जानकार नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार उनी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीबाट आजित छन् । आफूसँग गरेको समझदारी, सल्लाह, सुझावअनुसार कहिल्यै नचल्ने, सधैँ पेल्न मात्र खोज्ने, पूर्वाग्रह मात्र राख्ने ओली बानीसँग प्रचण्ड आजित भएको ती नेता बताउँछन् । हुन पनि ओली र उनी निकटहरूले प्रचण्डलाई यसैगरी गलाउने नीति लिएका छन् । भलै, ओलीको यो शैलीसँग खुला रूपमा होस् वा मौन बसेर– डटेरै लड्ने प्रचण्डको योजना छ ।
१५ वैशाखको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘वामदेवलाई किन भकुन्डो हानिँदो रहेछ भन्ने बल्ल बुझ्दै छु’ समेत भनेका थिए । तर त्यसको दुई दिन नबित्दै १७ जेठ साँझसम्म आइपुग्दा ओलीले उनै वामदेवलाई फस्ल्याङफुस्लुङ बनाएर उल्टै प्रचण्डलाई अप्ठेरोमा पारिदिए ।
प्रचण्डले माधवकुमार नेपालले पनि ओलीविरुद्ध राम्रो खुट्टा नटेकेको महसुस गरे । किनभने प्रचण्डले नेपाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भनेका थिए । तर ओलीले वामदेव कार्ड फालेपछि नेपाल तुलनात्मक रूपमा गले ।
जानकारहरू ओलीसँग एकता गरेको पछुतोमा छन् प्रचण्ड, यतिबेला । यसलाई केही गर्दा पनि नसकिने भयो भन्ने बुझाइमा छन् । हुन पनि अवस्था कस्तो छ भने बुहारी बिना मगरलाई मन्त्रीमा निरन्तरता दिनेबाहेक ओलीले प्रचण्डका हरेक कदममा बल्ड्याङ खुवाइदिएका छन् । त्यसैले यसबेला ओलीविरुद्ध धेरै नबोल्ने रणनीतिमा प्रचण्ड रहेको उनी निकट स्थायी समिति सदस्य बताउँछन् ।
भन्छन्, “ओलीका गतिविधिबारे बोल्नुभन्दा नबोलेरै जित्नु ठीक ठानेर अध्यक्ष मौन बस्नुभएको हो । यद्यपि कोरोना रोकथामका लागि चालिएको प्रयासमा होस् वा एमसीसीबारे– ओली र उनी निकटहरूको कार्यशैलीसँग अध्यक्ष बिल्कुलै सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।”
एमसीसीलाई लिएर शान्ति प्रक्रियायता प्रचण्ड सबभन्दा पेचिलो मोडमा छन्, यसबेला । ०५३ मा महाकाली सन्धिका विषयमा छलफल हुँदा प्रचण्डले त्यसमा सहभागी हुनु परेकै थिएन । त्यसबेला जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डले महाकाली सन्धि राष्ट्रघात हो भनेर एउटा विज्ञप्ति फालिदिएपछि पुगेको थियो । तर यसबेला परिस्थिति त्यस्तो छैन । ‘कोभन्दा को बढी राष्ट्रवादी देखिने’ दौड चलिरहेका बेला एमसीसीलाई लिएर आफूमाथि समेत ‘राष्ट्रघाती’ आक्षेप लाग्न सक्नेमा प्रचण्ड देखिन्छन् ।
०५३ मा महाकाली सन्धि गर्ने बेलाको जत्तिकै एमसीसीलाई लिएर पूर्वएमाले वृत्तमा भने पेचिलो बहस भइरहेको छ । यसमा पूर्वमाओवादी समूह भने मौन छ । पूर्वएमाले समूहका एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार पूर्वमाओवादीको मौनताभित्र दुइटा कारण छन् ।
एक– यो समूह पूर्वएमालेहरूलाई नै भिडाउन चाहन्छ । दुई– पूर्वएमाले नेताहरूमा जसरी पूर्वमाओवादीहरूमा जमेर बहस गर्ने ल्याकत छैन । प्रचण्डले जे भन्छन्, उनीहरू उतै हल्लिन्छन् ।
जानकारका अनुसार प्रचण्ड एमसीसीमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेपुवामा पार्ने रणनीतिमा छन् । त्यसका लागि उनले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेवलगायतको पनि साथ लिन खोजिरहेका छन् । सडक, सदन होस् वा पार्टीभित्रै । एमसीसीको विरोधमा आवाज उठाउन सुस्त गतिमै होस्, भूमिका खेलिरहेका छन् ।
तर प्रचण्डलाई अप्ठेरो के छ भने उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी परियोजना चालू थियो । यो परियोजना पूरै खारेज गर्दा अमेरिकासँग त सम्बन्ध चिसो बन्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समेत आफ्नो विश्वसनीयता गुम्ला कि भन्ने चिन्तामा छन्, प्रचण्ड ।
“त्यसैले एमसीसी पारित भए ओलीको टाउकोमाथि दोष लगाएर उम्कने, असफल भए आफूले भित्रभित्रै पहल गरेकाले प्रधानमन्त्री पछि सर्न बाध्य भए भन्ने रणनीतिअन्तर्गत प्रचण्ड मौन बसिरहेका छन्”, प्रचण्ड मौनताबारे ख्याल गरिरहेका नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, “प्रचण्डको यस्तो चाल ओलीले पनि बुझेका छन् । त्यसैले नै पूर्वजानकारीबिनै बैठक स्थगित गरिदिएका हुन् ।”